Apple mizara sary vitsivitsy amin'ilay magazay "Tower Theatre Store" vaovao any Los Angeles | Avy amin'ny mac aho
Jereo izay tiany Tim Cook ary ny ekipan'ny mpitantana Apple dia mirehareha amin'ny bonanza ara-bola ataon'ny orinasa miaraka amin'ireo magazay malaza misy eran'izao tontolo izao. Ao amin'ireo trano afovoany sy lafo indrindra amin'ny renivohitra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia hahita a Apple Store, izay mangatsiaka kokoa.
Amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao dia manokatra fivarotana vaovao any Los Angeles izy. Ary amin'ny fomba ahoana no anaovana azy raha tsy izany, dia miorina amin'ny trano manan-tantara «Tower Theater»Efa nisy izany tao afovoan-tanàna nanomboka tamin'ny taona 1927. Androany dia namoaka ny sarin'ny fivarotana lehibe ity orinasa ity. Fijerena maritrano.
El 24 amin'ny volana Jona Hanokatra fivarotana vaovao i Apple. Apple Store mahatalanjona hita any afovoan-tanànan'i Los Angeles. Fangaro izay mampifanohitra trano iray hatramin'ny fiandohan'ny taonjato lasa, miaraka amin'ny maoderina ny vokatra amidy ao aminy.
Ny fivarotana dia hitoetra ao amin'ny tranobe manan-tantara "Tower Theatre" naorina voalohany tao afovoan'i Los Angeles any 1927. Apple dia niara-niasa tamin'ny City Council, nitazona ireo mpiaro ny tontolo iainana sy ny artista maritrano mba hitahiry sy hamerina amin'ny laoniny ny hatsarana sy ny hakanton'ny teatra.
Filoham-pirenena lefitra ambony an'ny Apple amin'ny fivarotana, Deirdre O'Brien, hoy ity magazay vaovao ity "manome voninahitra ny tantara manan-tantara sy ny lova an'ity renivohitra fialamboly ity." Mino izy fa ity fiaraha-miasa ity dia mifototra amin'ny fifandraisana manokana amin'i Apple amin'ny mponin'i Los Angeles.
Ny magazay no isa 26o fa niely eran'izao tontolo izao i Apple. Any amin'ny faritry ny tanànan'i Los Angeles no misy azy ary hampiasa ekipa olona 100 hanompo ny mpanjifany sy ny mpitsidika azy rehetra. Ireo sary miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia ireo nasehon'ny orinasa androany tamin'ny famoahana azy, izay manambara ny datin'ny fisokafan'ny magazay vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple mizara sary vitsivitsy amin'ilay fivarotana «Tower Theatre Store» vaovao any Los Angeles